Cadeyn Mulkiilaha - COVID-19 foomamka ka Saarista
Warqada shaac ka qaadida?
Xusuusnow: Waa khasab inaad nuqul sharci ah ka siiso foomka shaac ka qaadida mulkiilaha guriga aad ku jirto oo aad degan tahay iska leh, ama ciddi kale ee xaq u leh inay kaa saarto ama kaa bixiso meesha aad degan tahay.
Cid kasta oo qaan-gaar ah oo ku qoran liiska gurigu, heshiiska kirada ama qandaraaska gurigu waa in iyana sidoo kale ay buuxiyaan ayna bixiyaan shaac ka qaadid.
Waxa aan kugula talin lahayn inaad ka eegto liiska heshiiska guriga ee sida loola xiriiro mulkiilalaha guriga.
Tusaale ahaan, hadii heshiiska liiska guriga aad ku degan yahay uu sheegayo waa inaad kula xiriirto aalad kumbuyuutar ah, kolkaa emayl ahaan ugu dir shaac ka qaadida mulkiilaha guriga, Emayl ugu dir, boostada ugu dir ama gacanta uga gee warqada mulkiilaha, u samee si kuu ogolaata in aad hesho cadeyn ah in mulkiilaha gurigu diridaada.
Aynu ka fikirno waxa seenyo dhici kara:
hadii aad emayl ahaan ugu dirto, waydii mulkiilaha gurigu inuu qiro helida waxa aad u dirtay.
Hadii aad ugu dirto dhambaal ahaan (text) kala har sawir shaashadeed (screeenshot) waxa aad u dirtay.
Hadii aad boostada ugu dirto, waydiiso qirid helid ah ee waxa aad u dirtay.
Hadii saa la sameeyo ma jiri doonaan wax su'aalo ah oo ku saabsan in mulkiilaha gurigaagu uu helay waxa aad u dirtay iyo in kale.
Hubi inaad naftaada uga harto nuqul wax kasta oo aad dirto.
Waxa aad u baahan tahay inaad haysato cadeyn ku saabsan waxa aad dirto lacala hadii loo baahdo inaad kento mar uun.